နိုင်သူပျော် ရှုံးသူပြုံး ကြစို့ – Ye Htut's Blog
ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ အချိန် အဆ” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးရေ တော့
၁။ အခု မှ အမြင်မှန်ရပြီး ဘက်ပြောင်းလာတယ်လို့ ပြောသူရှိတယ်။
၂။ ဘက်ပြောင်းသွားပြီလားလို့ စွပ်စွဲသူရှိတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ကာလမှာ ဘယ် လိုပဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့ စည်းရုံး ခဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးတဲ့အခါ နိုင် သူကလည်း ရှုံးတဲ့သူကို အားပေး၊ ရှုံးသူကလည်း နိုင်သူကို ဂုဏ် ပြု ဆိုတဲ့ အားကစားသမားစိတ်ဓာတ်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို လက်ခံနိုင်ရမယ်၊ ဒီမိုကရေစီခရီးဆက်နိုင်ရမယ် ဆိုတာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီယုံကြည်ချက်အတိုင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာ ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးလေးကို ပြန်လည်ဖတ်ရှုနိုင်အောင်မ ျှဝေလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတာဝန်က အနားယူပြီးချိန်က စလို့ ရဲထွဋ် ဟာ ရဲထွဋ် ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုအပေါ်မှာပဲ ရပ်တည်ပါတယ်။ ဘက် မရှိတဲ့ အတွက် ဘက်ပြောင်းဖို့ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ဘက် မရှိတဲ့ အတွက် တစ်ဖက်ဖက် ကို အားပေး ရပ်တည်တယ်လို့ ယူဆပြီး ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ် တုန်လှုပ် ဖို့အကြောင်းလည်းမရှိပါဘူး။
Ye Htut is with Aung Thein Kyaw and
.November 8, 2015 · Yangon ·
ညနေကကျွန်တော်ကိုနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတစ်ခုက ရွေးကောက် ပွဲနေ့အပေါ် အမြင်ကိုမေးခဲ့သည်။ ဒီတော့ ၁၉ ၉ ၀ မှစပြီး ကျွန်တော်ကြုံခဲ့သမ ျှ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေ အတက်ကြွဆုံးပါဝင်တာတွေ့သည့်အတွက် ဝမ်းသာသည်၊ မဲဆန္ဒရှင်များတက်ကြွစွာပါဝင် မှုသည်ဒီမိုကရေစီအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်၊ ရွေးကောက်ပွဲမှ ပေါ်ထွက်လာသည့် ပြည်သူတွေအဆုံးအဖြတ်ကို လက်ခံပြီး ရှေ့ဆက်ဖို့ပဲလိုသည်ဟု ဖြေခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ကာလ နှစ်လတွင် ပါတီအသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများ၊ ပါတီထောက်ခံသူများ အားတက်သရော မဲဆွယ်ခဲ့ကြသည်။ လွတ်လပ် ပွင့်လင်းလာသော နိုင်ငံရေးအခြေအနေတစ်ရပ်အောက်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် လူစုံတက်စုံ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သည့်အတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေပြင်းထန် တာကလည်း အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
ခံစားချက်တွေလွန်ကဲပြီးအလွန်အကျွံပြောဆိုမိကြတာတွေလည်းရှိသည်။ ဥပဒေကို ချိုးဖောက် သည်အထိ ဖြစ်သောကြောင့် တိုင်ကြားတာတွေ၊ အရေးယူတာတွေ လည်းရှိခဲ့ သည်။အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနယ်ပယ်အသီးသီးမှာ၊မိသားစုတွေအတွင်းမှာ၊ မိတ်ဆွေ တွေအတွင်းမှာ ကွဲပြားမှုတွေလည်း ရှိခဲ့သည်။
ယနေ့ညနေမှာတော့ အားလုံးမဲပေးခဲ့ကြပါပြီ။ မဲရုံအသီးသီးမှာ မဲတွေရေတွက်နေကြ ပါပြီ။ မဲရလဒ်တွေပေါ်ထွက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် တစ်ခုပဲလုပ်ဖို့ရှိတော့ သည်။ဒါကကျွန်တော် တို့ ချစ်မြတ်နိုးသော ပြည်ထောင်စု သမ္မတနိုင်ငံတော်ကြီး တည်ငြိမ် အေးချမ်း ဖို့၊ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့ပဲဖြစ်သည်။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင်ပုံမှန်ကျင်းပနေသောရွေးကောက်ပွဲ များရှိသည်။ အဲဒီ ရွေးကောက် ပွဲများတွင် ဘယ်လောက်ပဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မဲဆွယ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ ရှုံးသူက အနိုင်ရသူ ကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် လက်တွဲလုပ်ကြ သည်။ ဝေဖန်စရာရှိက ဝေဖန်၊ ထောက်ခံစရာရှိက ထောက်ခံ ကြသည်။
နိုင်သူပျော်သလို၊ ရှုံးသူကလည်း ပြုံးနိုင်သည်။ မုဒိတာပွားနိင်သည်။ ဒါသည်ပင် ဒီမို ကရေစီ ၏ အနှစ်သာရဖြစ်သည်။
ဘယ်သူက ဘယ်ပါတီကိုထောက်ခံခဲ့လို့ ဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေကို အလုပ်ထဲကို၊ အသိုင်းအဝန်းထဲကို၊ ဘဝထဲကို ယူမလာကြ။ ကွဲ ပြားခြားနားမှုတွေထဲက စုစည်းညီညွတ်မှုကိုပဲ ရှာကြသည်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့နိုင်ငံတွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲများသည် နိုင်ငံ့အတွက်အားသစ်ကိုသာ ဖြစ်စေသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ကြိမ်ပြီးတိုင်း နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အားသစ်တွေရသည်ဟု ဆိုချင်သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကား ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အရှိန်မြှင့်ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးသည့် သမိုင်းဝင် ရွေး ကောက်ပွဲဖြစ်သည်။
ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးကနေ ခိုင်မာသောခြေလှမ်းတွေဆက်လှမ်းနိုင်ဖို့ အတွက် ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလက ကွဲပြားခဲ့သမ ျှကို ချန်ထားခဲ့ပြီး ညီညီညာညာ ရှေ့ ဆက်လှမ်းကြပါစို့ဟုသာ တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
2 thoughts on “နိုင်သူပျော် ရှုံးသူပြုံး ကြစို့”
aung aung htet says:
အခုလိုအမှန် ကိုအမှန်တိုင်းပြောရဲတာဝမ်းသာစရာပါ။ အခုလဲ လူကြိုက်များလာပြီလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ် ။ comment တွေလဲဖတ်ကြည့်မယ်ထင်ပါတယ် ။ video တွေမှာ ပြောသွားတာတွေသဘောကျမိပါတယ် ။ လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်လိုပြောဆိုပြုမူတာကတကယ့်ကိုလေးစားမိပါတယ် ။ အခုက USDP က နိုင်ငံရေး ပါတီတွေကြားထဲမှာ ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာ ဂျိုနဲ့လား တောင်မေးယူရမဲ့ပါတီမျိုးဖြစ်လာနေပါတယ် ။ အဲ့လို သာ အောက်တန်းကျပြီး ရှေ့ဆက် ကန့်လန့်တိုက်နေမယ်ဆိုရင်တောင် နောင်ဆို နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့တောင် ရပ်တည်ဖို့ဖြစ်နိုင်တော့မယ် မထင်ပါဘူး ။ အစထဲက လူမုန်းများပါတယ် ဆို လူမုန်းပိုများအောင်လုပ်လေ တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီငယ်လေးတွေကတောင် နောင်တချိန်မှာ သူ့ကို ကျော်တက်ကုန်မှာ မြင်ယောင်မိပါသေးတယ် ။ btw စာလဲ နည်းနည်း ရှည် သွားတာ စိတ်မရှိပါနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ video တွေမှာ ပြောသွားတာသဘောကျလို့ blog ကိုရှာပြီး comment ဝင်ပေးတာပါ။ နောက်လဲဒီလို အမှန်ဘက်ကဘဲ ရပ်တည်ပေးရင်း ပြည်သူရဲ့ချစ်ခင်မှုကို ရယူပါလို့တိုက်တွန်းရင်း ….
Thanks Ko Ye Htut for sharing your opinion and point of view on the current political and economic situation in Burma. Please stand your ground and keep contributing your knowledge to the people.